WARARKA DOORASHADA PL: Loolanka Doorashada PL oo ka gudbay marxalad cusub, una gudbay waqtiyadii ugu adkaa, Siyaasiin caqabad cusub muujiyey+DOORKA ISIMADDA. – Puntlandtimes
WARARKA DOORASHADA PL: Loolanka Doorashada PL oo ka gudbay marxalad cusub, una gudbay waqtiyadii ugu adkaa, Siyaasiin caqabad cusub muujiyey+DOORKA ISIMADDA.
March 9, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Loolanka loogu jiro qabashada Xilka Madaxtinimada Puntland ee sannadka 2019-ka ayaa ka soo gudbay caqabado iyo arrimo siyaasadeed oo ku aadanaa tuhunka sheegayey in Xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay ku talo jirtay in ay sameyso mudo kororsi xileed, kaas oo ahaa arrin weyn ay isha ugu hayaan welwelna ka qabeen siyaasiin iyo Musharaxiin u taagan xilka Madaxweyne-nimada Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa todobaadkan sii dhamaanaya cadeeyey doorkiisa, wuxuuna sheegay in aysan waxba ka jirin awoodna u laheyn arrimaha ku saabsam mudo kororsiga, isagoo cadeeyey in doorashada la qaban doono 8 January 2019, ayna ku qabsoomi doonto waji ka wanaagsan kii ay ku dhacday sannadkii 2014-kii oo uu isagu ku guuleystay.
Madasha Puntland Focus Group oo ay ku mideysan yihiin siyaasiin iyo musharaxiin u dhashay Puntland wey soo dhaweeyeen dalabka Madaxweyne Cabdiweli, waxayse u sheegeen in loo baahan yahay in xooga la saaro sidii loo sugi lahaa ammaanka iyo difaaca dalka, maadaama waqtigan wixii ka dambeeya la galay loolanka doorashada ee Madaxtiniada oo ay dhinacyadu kala mashquulaan.
Laakiin sheekada maahan mid dhamaatay siyaasiintan waxay ka hadleen arrimaha ku saabsan xulitaanka guddiga Xalinta Khilaafaadka Xildhibaanada ama soo saarayaasha Xildhibaanada sharciga noqonaya 2019-ka oo ay inta badan isku qabtaan Madaxda waqtigu ka dhamaado & Musharaxiinta xilkaas raadinaya.
Siyaasiintu waxay muujiyeen dalabkooda ku aadan in Madaxweynaha Puntland uu maskax iyo talo badan galiyo sidii ay xubnahaas u noqon lahaayeen kuwa si wanaagsan loogu kalsoonaan karro xirfadooda hogaamineed iyo sumcadda ay ku dhex leeyihiin bulshada.
Madashu waxay hadda xooga saartay sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen arrimaha Isimadda & Waxgaradka oo ah kuwa leh awooda soo xulitaanka xubinta baarlamaanka, kuwaas oo Iyana sii dooran doona Madaxda 2019-ka, waxayna ugu yereen in ay masuuliyadooda muujiyaan.
Loolanka Madaxtinimada Puntland ayaa hadda ka gudbay wareegii kowaad, wuxuuna wajahayaa marxalado kale oo siyaasadeed, kuwaas oo ah loolanka ay kala qabaan musharaxiinta u taagan xilkan, gaar ahaana marka laga hadlayo kala jiidashada taageerayashooda.
Xiiso gaar ah ayay Shacabku u hayaan doorashada nagu soo beegan, gaar ahaana dhinacyada ay khuseyso, taageerayaasha musharaxiinta ayaa aad ugu baratamaya baraha bulshada oo ilaa hadda ay ka socdaan warbixino taageerayaasha dhinacyadu ay soo bandhigayaan.
Musharaxiinta Madaxweyne-nimada Puntland ee ilaa hadda la og yahay ayaa kala ah, Siciid Cabdullaahi Deni, Faarax Cali Shire, Cali Cabdi Awaare, Cali Xaaji Warsame, Maxamuud Khaliif Jabiye, Al Xaaji Maxamed Yaasiin, Cabdirisaaq Jaama Janogale iyo musharaxiin kale oo aan wali si rasmi ah u cadeyn hankooda siyaasadeed, kuwaas oo dhawaan ku soo fool leh gudaha dalka Soomaaliya.
waxqabad haday noqoto cabdiweli wuu qabtay waxqabad muuqda oo aan la inkiri karin …umana maleeynayo in puntland soo marayo mid lamid ah haday noqoto waxqabad …Laakiin hal arin ayaan kugu raacsanahay oo ah cabdiweli in uu ahayn dagaalyahan taasna waxuu kalamid yahay Cade muuse Allaha ha u naxariistee iyo Dr Faroole. marka cabdiweli si gooni ah ha u eedayn…
saxiib ..carmay sheekadu fir raac tahay.